Strawberry quartz - Rinoyevedza ruvara - Gadziridza 2021 - Vhidhiyo
Strawberry quartz crystal zvinoreva uye kuporesa zvivakwa. girini sitirobheri quartz inoreva.
Tenga zvakasikwa sitiroberi quartz muchitoro chedu
Quartz ndiyo imwe yemaminerari akawanda kwazvo pasi pano, inoita chikamu gumi nezviviri kubva muzana chePasi. Kunyangwe paine chokwadi chekuti quartz yakajairika. Icho chiri kure nekufinha. Nyika yequartz inosiyana zvakasiyana. Pakati pezviitiko zvinonakidza kwazvo muquartz yenyika.
Iko kune zvisina kujairika inclusions izvo zvinowanzo kuwanikwa mune yakajeka makristasi. Gemologists vanoshandisa izwi rekuti "sagenitic quartz" kureva quartz yakajeka isina mavara ine makristasi akafanana neakakosha eutrutile, actinolite, goethite, tourmaline kana zvimwe zvicherwa.
Hematite uye Lepidocrocite
Green sitirobheri quartz zvinoreva
Strawberry quartz inoreva uye kuporesa zvivakwa
Strawberry quartz dombo rekuzvarwa
Iko sitirobheri quartz yakasikwa here?
Chii chinoreva sitirobheri quartz?
Iko sitirobheri quartz yakafanana neiyo rose quartz here?
Iyo sitirobheri quartz inobva kupi?
Chii chakra istrawberry quartz?
Ndezvipi zvakanakira sitirobheri quartz?
Chii chinonzi sitirobheri quartz?
Nzira yekuchenesa sei sitirobheri quartz?
Muenzaniso we comon wakanyanya ndeye quartz inodzora. Iine inclusions yegoridhe rutile kana titanium. Quartz ine tsvuku inclusions yesimbi oxide hainyanyo kuwanikwa. Isu tinowanzo shandisa zita rekuti sitirobheri quartz kana zvakare red fire quartz.
Mimwe mienzaniso ine yakanaka kwazvo inclusions iyo inongoonekwa chete pasi pekukudza, ichikweretesa iyo quartz imwe kana zvishoma yakafanana yeruvara rutsvuku. Vamwe vane yakajeka inoonekwa inclusions uye inogona kuoneka seyakajeka quartz ine tsvuku tsono, maflakes kana spangles.
Inowanikwa mune mashoma nzvimbo, sitirobheri quartz inogamuchira iyo yakasarudzika kupenda kuburikidza Hematite uye Lepidocrocite inclusions. Vanhu vazhinji vakakanganisa zvisizvo
Iri dombo rinokosha rekudzima quartz, asi pasi pekuongororwa zvakanyanya, zvinova pachena kuti sitirobheri quartz yakasikwa zvachose. Zvakare, zvakakodzera kunongedzera kuti zita rave kushandiswa zvisirizvo nemajeweler akati wandei. Ivo vanotengesa girazi uye zvakare emanyepo matombo sedombo dombo!
Dombo reguyo rine maonero akasiyana-siyana. Icho chinopfuurira pane zvaakabva. Avo vakatengesa kusvika kure nematombo ane mavara ose ave kubva kuMadagascar uye vari 100% zvakasikwa. Pasina kurapwa, uyewo pasina kusimbiswa uye pasina kupisa! Zvechokwadi zviratidzo zvinoshamisa kubva kumadzimai evanhu.
Green sitirobheri quartz haipo. Iri izita rekutengeserana rinoshandiswa nevatengesi vematombo asiri gemologist. Zita chairo rebwe iri iaventurine quartz. Ruvara rwakajairika rweaventurine nderegirini, asi inogona zvakare kunge iri orenji, shava, yero, bhuruu, kana grey.
Chrome-inotakura fuchsite, dzakasiyana siyana muscovite mica, ndiyo yakasarudzika kuiswa uye inopa silvery girini kana bhuruu sheen. Maorenji uye browns anonzi anonzi hematite kana goethite. Nekuti aventurine idombo, zvimiro zvemuviri zvinosiyana: giravhiti yayo inogona kunge iri pakati pe2.64-2.69 uye kuomarara kwayo kwakadzikira pane imwechete-yekristaro quartz panenge pa6.5.
Cherry quartz ibwe rakagadzirwa, feni sitirobheri quartz. zvakasiyana zvachose uye mitengo yacho zvakare yakasiyana zvakanyanya, saka ndokumbira utarise dombo rako zvakanaka usati watenga.
Nezve dombo rinowanikwa kushomeka, nekuda kwechitarisiko charo chisina kujairika, Strawberry quartz crystal zvinoreva uye kuporesa zvivakwa zvave kutogashira kufarira kwakawanda kubva kuvarapi vekristaro nevazivi venyeredzi. Isu tinoshandisa iyo kukurudzira simba remwoyo kuzadza imwe nekunzwa kwerudo.
Libra chiratidzo chezodhiac chestrawberry quartz. Kune avo vanozvarwa kubva Nyamavhuvhu 23 kusvika Gumiguru 22, zvinhu zvaungade kuti zviende, senge kuve nehunhu uye kusagadzikana, zvichanyangarika nehunhu. Iyo yerudo iri mukati mako inomuka uye uwane mikana yekutsvaga rudo kana dombo riri padivi pako. iyo kristaro inomutsa matarenda matsva senge mimhanzi uye kupenda kana kunyora.
Ehe. Dombo iri rinowanzoitika. Inowanikwa chete muRussia, Brazil neMexico. Nekudaro iwe unogona zvakare kuwana yekunyepedzera kutevedzera dombo iri, semuenzaniso nedhayi aventurine quartz.
Dombo rematombo rine zvarinoreva uye zvivakwa zvinoenderana nerudo. Vanhu vaitenda kuti ine simba rekusimudzira simba remoyo wakakomberedza zamu. Iko kristaro inogona kugamuchira rudo simba kubva kudenga. Zvinokuita kuti unzwe kugadzikana nekuzadza pfungwa dzako nerudo simba.
Rose quartz ibwe rakasiyana. Iri ibwe rudzi rwe quartz iyo inoratidza yakacheneruka pinki kumuka yakatsvuka hue. Ruvara rwacho runowanzo kutariswa sekuteedzera kwehuwandu hwe titanium, iron, kana manganese, mune izvo zvinhu. Imwe yakasimuka quartz ine microscopic rutile tsono inoburitsa asterism muchiedza chinopfuudzwa. Zvichangoburwa X-ray diffraction zvidzidzo zvinoratidza kuti iwo ruvara rwunokonzerwa neakaonda microscopic tambo dzingave dumortierite mukati mekartz.
Makristasi anowanzo kuwanikwa muRussia uye munzvimbo dzakapoteredza dzakadai seKazakhstan, pamwe neBrazil neMexico.
Strawberry quartz ine simba kwazvo, inotsvedza, uye ine simba rerudo sezvo richishanda mushe neane chakras panguva imwe chete. Mudzi Chakra, Solar Plexus Chakra, Moyo Chakra, uye Crown Chakra. Strawberry quartz inoburitsa simba imwe yekuda kukunda hurembere uye kusimbisa zvese pfungwa nemweya wako.
Iri dombo rine kugona kukwidziridza chinangwa chemunhu cherudo, kukoshesa, uye rupo. Inogona kuburitsa simba nekunze uye inokanganisa nharaunda uye nevanhu vakakupoteredza. Iyo dombo rinokosha kukwezva rwechokwadi rudo kana mweya mweya. Inobatsira kuenzanisa muviri, mweya, uye pfungwa.
Kristaro inobatsira kune avo vanogara vachida simba rinonyaradza kana rinonyaradza, sevarapi nevarapi. Iko kristaro iyo inosimbisa kubatana pakati peMoyo wako neCrown chakras uye uvaunze mukuwirirana nemumwe.
Iwe unogona kuchenesa dombo rako munzira dzakawanda. Kuchenjera kudzivirira mvura kana uchichenesa kristaro yako panyama. Rikwiza nemucheka wakanyorova kana uchifanira kubvisa tsvina uye kusvibisa kamwe chete pasvondo.
Natural sitirobheri quartz inotengeswa mune yedu gem shopu
Strawberry Goldstone 4.27 CT